Ny sidina Johannesburg mankany Cape Town amin'ny South Africa Airways izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina Johannesburg mankany Cape Town amin'ny South Africa Airways izao
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny fiverenan'ny SAA dia hanome ny lanjan'ny tsena bebe kokoa amin'ny vidin'ny tapakila. Hatramin'ny nidiran'ny mpitatitra ary avy eo ny fanavotana ny orinasa dia tsy nisy ny fahaizan'ny eo an-toerana ary midika izany fa nanjary lafo kokoa ny tapakila. Ny fiverenan'ny SAA any an-danitra dia hidika amin'ny vidin'ny fifaninanana bebe kokoa ary ahafahan'ny Afrikanina Tatsimo misidina.
Taorian'ny fiomanana amam-bolana dia nanohy ny serivisy afrikanina sy faritra afrikanina i South Africa Airways.
Ny sidina voalohany nataon'i South Africa Airways dia miainga avy any Johannesburg mankany Cape Town amin'ny 23 septambra.
Ny sidina dia kasaina hanomboka renivohitra afrikanina dimy ihany koa - Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka ary Maputo.
Taorian'ny fiomanana amam-bolana taorian'ny nivoahany ny fanavotana orinasa, dia nanohy ny serivisy afrikanina sy faritra afrikanina i South Africa Airways (SAA). Ny mpitatitra voalohany
Ny sidina voalamina dia ny fiaingan'ny maraina maraina avy any OR Tambo International any Johannesburg mankany Cape Town Iraisam-pirenena ny 23 septambra ary iray amin'ireo sidina miverina telo isan'andro eo anelanelan'ny tanàna roa. Ny sidina dia kasaina hanomboka renivohitra afrikanina dimy ihany koa - Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka, ary Maputo.
Nilaza ny Tale jeneralin'ny vonjimaika an'ny SAA, Thomas Kgokolo, fa: «Herinandron'isa mirehareha sy manan-danja ho an'ny SAA ity herinandro ity sy ny mpiasa ao aminy ary koa ny olom-pirenena Afrikanina Tatsimo rehetra. Ny dia niverina tany an-danitra dia tsy mora ary manome voninahitra ny mpiasa mazoto amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasa izay ananako ary mametraka ora maro mialoha ny anio. Ny olona amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasa dia tsy maniry afa-tsy ny hahombiazan'ny SAA ary hanangana orinasam-piaramanidina vaovao miorina amin'ny fiarovana sy ny serivisy fakan-tahaka ho an'ny mpanjifa. "
Kgokolo kosa miteny South African Airways manana hetaheta lehibe izy io ary ny etôma ambony dia ho fitantanana fitantanambola tompon'andraikitra sy malina ary fanoloran-tena amin'ny mangarahara. "Atsanganay indray ity orinasa ity amin'ny fahitana avonavona amin'ny marika sy ny iray izay napetraka ho an'ny mpiasa tsirairay. Ny laharam-pahamehanay voalohany dia ny manompo ny
ny làlana fanombohana mahomby sy mahomby ary avy eo mitady hanitatra ny tamba-jotra ary hampitombo ny sambon-tsika, miankina amin'ny fangatahana sy ny tsena izany. ”
Ny filohan'ny filan-kevitry ny SAA, John Lamola, dia nilaza fa: “Ny fiverenan'i SAA dia hanome fifandanjana ara-barotra bebe kokoa amin'ny vidin'ny tapakila. Hatramin'ny nidiran'ny mpitatitra ary avy eo ny fanavotana ny orinasa dia tsy nisy ny fahaizan'ny eo an-toerana ary midika izany fa nanjary lafo kokoa ny tapakila. Ny fiverenantsika any an-danitra dia midika ho vidin'ny fifaninanana bebe kokoa ary ahafahan'ny Afrikanina Tatsimo misidina. ”
Lamola hoy saaNy fiverenany any an-danitra koa dia mpanampy ara-toekarena lehibe, indrindra mifantoka amin'ny sidina entam-be. “Etsy ankilany ny toe-karena, misy koa ny anton'ny hambom-po. Ny fahitana ny volon'ny SAA amin'ny tarmac iraisampirenena dia tsy vitan'ny Afrika atsimo ihany fa ny sisa amin'ny kaontinanta. ”
saaMpanatanteraka Vonjimaika: Nilaza i Simon Newton Smith, mpivarotra: “Amin'ny lafiny maro, fanoharana iray ho an'ny firenena izahay; tsy nanana ny tantara mora indrindra hatrizay izy io, fa mahazaka kosa, mirehareha ara-drariny ny olony ary firenena tsy azo hamaivanina izany. Ny asanay dia ny mampiseho amin'izao tontolo izao fa mihombo i Afrika Atsimo ary manomboka ny dia ho sitrana tanteraka sy tsara kokoa. Manomboka manetry tena indray izahay nefa manana faniriana lehibe. ”
Ny Lehiben'ny Pilot an'ny SAA, Mpho Mamashela, dia nilaza fa “isika rehetra izay eo alohan'ny fiaramanidina mandritra ny herinandro sy volana ho avy dia mahatakatra tsara ny fahitana vaovao an'ny SAA ary faly izahay fa anisan'ity vanim-potoana vaovao ity. Tapa-kevitra ny ho lavorary tanteraka izahay ary hampirehareha ny Afrikana Tatsimo. ”